Lalao 7 mitovy amin'ny Among Us for Android | Androidsis
Ignacio Sala | 01/07/2021 22:00 | Lalao Android
Raha mieritreritra ianao fa tonga ny fotoana hanovana ny lalao, saingy tianao ny lalao fanesorana ara-tsosialy, ao amin'ny Play Store, tsy mitovy ny ananantsika lalao mitovy amin'ny Among US, lalao manolotra toe-javatra vaovao, litera vaovao ary ambonin'izany rehetra izany, feo samy hafa.
Ny tena manintona an'ity karazana lalao ity dia ny maha-multiplayer azy ireo, satria mamela antsika mihomehy miaraka amin'ireo namantsika. Ireo lalao rehetra asehoko anao eto ambany, atolory anay ity fampiasa ity mba tsy ho tratranay ireo asa rehetra ananantsika any Etazonia.
1 Sasao izahay
2 Miahiahy: Trano miafina
4 Tanànan'i Salema
5 Agent Triple
7 Manafina ^^
Muder us dia klone of among US, kanefa na dia izany aza, nalain'ny mpampiasa maherin'ny 10 tapitrisa izy io ary manana isa salan'isa 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao aorian'ny famerenana maherin'ny 800.000, isa avo kokoa noho ny lalao tany am-boalohany izay misy kintana 3,5.
Ity lohateny ity dia ahafahantsika milalao an-tserasera amin'ny lalao amin'ny mpilalao 6 ka hatramin'ny 20. Ny mpilalao dia tokony hihazona ireo seho telo omen'ny lohateny antsika raha tsy mahita mpamono olona iray na maromaro isika. Tsy toa an'i Etazonia, Muder us dia manolotra andraikitra 4 samihafa azon'ny mpilalao atao:
Mpamono olona. Ilay mpamono olona, ​​araka ny anarany, dia hiandraikitra ny famongorana ny isan'ny mpiasa betsaka indrindra nefa tsy ho voamariky ny olona na miaraka amin'ny fanampian'ny mpiray tsikombakomba aminy.
Mpitsongodia. Tsy maintsy manangona ireo famantarana ilaina rehetra ianao mba hahalalanao hoe iza ilay mpamono olona.
Accomplice. Ny mpiray tsikombakomba aminy no hiandraikitra ny fanafenana sy fanadiovana ny lalantsara ary ny razana navelan'ilay mpamono olona mba tsy hahitana azy.
Crewman. Miandraikitra ny fanatanterahana ny fikojakojana ny sambo sy ny fahitana ilay mpamono olona miafina.
Ireo lalao dia mety ho an'ny daholobe na tsy miankina amin'ny Internet. Muder us dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, mitaky Android 4.1 na taty aoriana, mampiseho doka sy fividianana fampiharana izay ahafahantsika manamboatra endrika ny toetrantsika.
Miahiahy: Trano miafina
Ny hetsika ao amin'ny suspect dia mitranga ao amin'ny trano be, izay a mpilalao ambany indrindra amin'ny mpilalao 10 Tsy maintsy mamaha ny zava-miafin'ny famonoana olona izy ireo, manatanteraka asa fanadihadiana mba hahitana ny mombamomba ilay mpamono olona, ​​saingy ny fitandremana fa ao anatin'ny vondrona izy ary hanao izay rehetra azo atao.
Vantany vao vita ny fihodinana tsirairay, dia manomboka ny fihodinana, izay tokony hanazavan'ireo mpilalao ny hevitr'izy ireo mba hahitana hoe iza no mino fa mpamono olona amin'ny alàlan'ny resaka amin'ny chat natolotry ny fampiharana.
Miahiahy: Mistery Mansion dia misy ho anao misintona maimaim-poana, mitaky Android 4.4 ary mampiditra fividianana fampiharana. Miaraka amin'ny famerenana maherin'ny 400.000, manana salan'isa eo ho eo amin'ny kintana 4,3 amin'ny 5 azo atao.
Developer: Biby Biby
Bretrayal.io dia lalao multiplayer izay mila hamahana isika izay mpamadika ny ekipa. Afaka milalao ireto lohateny ireto 5 ka hatramin'ny 11 ny mpilalao. Ity lohateny ity dia misy scenario roa anaovana ny lalao: sambon-danitra sy trano an-tsaina. Toy ny ao Etazonia dia azontsika atao ny manamboatra ny endrik'ireo toetrantsika amin'ny alàlan'ny kojakoja sy fitafiana marobe.
Bretrayal.io dia afaka maimaimpoana raha misintona amin'ny Play Store, mitaky Android 4.4 na avo kokoa ary misy ny fividianana fampiharana. Izahay koa dia manana kinova azo alaina navigateur, izay ahafahantsika milalao an'ity lohateny ity amin'ny namana hafa na dia tsy manana finday finday Android aza izy ireo na te-hanao izany am-pitoniana kokoa amin'ny solosaina.
Tsy toy ny mpisolo toerana hafa any US izay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity, ny tanàna Salem dia veterana ao amin'ny Play store, iray amin'ireo lalao fihenam-bidy sosialy tranainy indrindra ary miaraka amina tobin'ny mpilalao maherin'ny 8 tapitrisa.
Ny isan'ny mpilalao faratampony Iza no afaka milalao Town of Salem dia 15 taona, noho izany ny vondrona namanao dia tena lehibe ary tsy afaka milalao eo anelanelantsika rehetra foana ianao, tokony andramo ity lohateny ity.
Ny hetsika any Town of Salem dia mitranga ao amin'ny tanàna kely iray, ny iraka ataontsika dia ny hiaro ny mpiara-monina (mpilalao) rehetra na dia tsy fantatsika aza ny miafina miafina hita ao aorin'izy ireo (tsy miandany, mpikamban'olona, ​​mpamono olona na mpandoro trano).
Town of Salem, azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, mitaky Android 4.4 na taty aoriana, misy doka sy fividianana fampiharana. Ny iray amin'ireo teboka ratsy amin'ity lohateny ity dia amin'ny teny anglisy ihany.
Tanànan'i Salema - Ny fanekena
Ny safidy hafa mitovy amin'ny Among US dia hita ao amin'ny Triple Agent, lalao iray feno hosoka, famadihana, famantarana miafina ary fihenan'ny fiaraha-monina. Fitaovana iray ihany no ilaina mba hahafahan'ny mpilalao 9 mankafy an'io anaram-boninahitra io.
Ny lalao dia manana faharetana maharitra 10 minitra, ahafahantsika ho agents na agents double an'ny virus. Raha tsy maintsy ho Agende avo roa heny isika dia tsy maintsy mamafy fisalasalana amin'ireo sisa mpilalao fanambarana vaovao izay manampy antsika hanafina ny mombamomba antsika. Amin'ny fiafaran'ny lalao dia mila mifidy ny mpilalao tsirairay hahalalany hoe iza ilay agents double.
Triple Agent dia misy ho anao misintona maimaim-poana, mitaky Android 4.1 na avo kokoa, misy doka sy fividianana fampiharana.
Developer: Rook matsiro
Wolvesville dia mitranga any amin'ny tanàna samihafa, tanàna kely misy antsika roahy ny mpanafika / herin'ny ratsy, amin'ny lohateny izay manambatra ny fahavelomana, ny ady ary ny famitahana amin'ny refy mitovy. Ity lohateny multiplayer ity dia mamela mpilalao 16 farafaharatsiny isaky ny lalao.
Ity lohateny ity dia manana fampidinana mihoatra ny 10 tapitrisa, isa salan'isa 4,4 kintana amin'ny 5 azo atao mifototra amin'ny isa 300.000 mahery. Mila Android 4.1 na avo kokoa, azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Miaraka amin'ny fetra farany ambony misy mpilalao 20, hitantsika i Undercover ^^, lohateny hafa amin'ny hoe Manolotra anay US. Undercover ^^ dia mety raha milalao miaraka amin'ny namana na fianakaviana isika satria tsy maintsy jerentsika ny fihetsika ataon'ny mpilalao tsirairay hahitana hoe iza Andriamatoa White. Ao amin'ity lohateny ity dia misy karazana mpilalao telo: Citizens, Undercover ary Andriamatoa White.
Ahoana ny fiasan'ny Undercover ^^? Ampitao amin'ireo namanao ny finday mba hahafahan'ny mpilalao tsirairay misafidy ny anarany ary hahazo teny miafina. Ny olom-pirenena rehetra dia hahazo teny iray ihany, ny Undercover dia hahazo teny somary hafa, ary Andriamatoa White no handray ny ^^ famantarana.
Aorian'izany, ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy mamaritra ny teniny, ary Andriamatoa White kosa tsy maintsy manamboatra. Amin'ny ampahany amin'ny fifidianana, ny mpilalao manana teny hafa noho ny maro an'isa no ho ahiahiana voalohany. Hampahafantatra antsika ny fampiharana, rehefa tapitra ny lalao, iza no mr fotsy. Raha nanao ny marina isika dia handresy ny lalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao 7 mitovy amin'ny Among Us for Android
Tsy fantatrao izay hatao amin'ireo finday taloha? Fomba hanomezana fiainana faharoa azy ireo